Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Markuu arkay: Qodobka 90aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Markuu arkay: Qodobka aad ee. DASTUURKA JAMHUURIYADDA SOMALILAND Tusmada Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland Arar Qaybta 1aad Xubinta 1aad Tilmaanta. Jamhuuriyadda Somaliland ku ansixisay natiijada Aftida Dastuurka. Jamhuuriyadda Somaliland ee ku meel gaadhka ahaa. Markuu tixgeliyey: Qodobka 47aad.
Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta xubnaha Golaha Wasurada.
Guddoomiyaha Maxamadda Sare oo isla markaana ah Guddoomiyaha Maxamadda Dastuuriga ah ayaa dhaarinaya cid kasta oo Dastuurku ku waajibiyey dhaartan Dastuuriga ah, ka hor inta aanu xilkiisa bilaabin; sidoo kale waxaa jamhuuriyadva dhaarinaya Madaxweynaha. Waxa Ku-xigeenka Guddoomiyaha noqon jamhuugiyadda garsooraha dhinaca darajada ugu sarreeya garsoorayaasha ka tirsan Maxamadda Sare Seniority.
Fadhiyada Golaha Guurtida waa kuwa furan; waxaana ay noqon karaan kuwa xidhan sida ku cad Dastuurka. Sinnaanta Muwaadiniinta 9- Qod. Hantida guud ee lahaanshaheeda ama ka faa’iidaysigeeda loo baahdo in Ia wareejiyo waxay ku wareegi kartaa si xeerka waafaqsan.
Dacwadda dembiga ah ee Iagu eedaynayo xubnaha Golayaasha waxa soo oogaya Xeer-ilaaliyaha Guud, ka bacdi marka Golaha xubintu ama xubnuhu ka tirsanaayeen ay maamuuska kaga xayuubiyaan saddex meelood laba ahaan tirada guud ee Golaha. Qofna lama fara-gelin karo qoraalladiisa gaarka ah, waraaqihiisa boosta ama xidhiidhkiisa isgaadhsiineed, marka laga reebo xaaladda uu xeerku baneeyo baadhitaankooda, daba-galkooda, ama dhegaysigooda iyada oo ay markaana waajib tahay in la helo amar garsoore oo sababaysan.
Ma bannaana in loo magacaabo xilka Guddoomiyaha Maxamadda Sare qof aan buuxin shuruudaha hoos ku sheegan: Nafta aadamuhu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi ja,huuriyadda oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo. By continuing to use this website, you agree to their use.
Waxa madaxda sare ee dawladda loola jeedaa: Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Marka uu fadhiisan waayo laba kal-fadhi oo caadiya oo isku xiga, iyadoo aanay keenin duruuf awoodooda ka baxsani.
Dacwadaha aan ciqaabta ahayn waa lagu oogi karaa xubinta Golaha Wakiilada iyadoo aan oggolaanshaha Golaha Wakiilada loo baahnayn.
WAX KA BARO DASTUURKA JAMHUURIYADDA SOMALILAND
Qofka loo dooranayo somalilandd Golaha Guurtida waa in uu yeesho shuruudaha qofka isu- taagaya xubinimada Golaha Wakulada marka laga reebo da’da iyo heerka aqoonta oo noqonaya sidan hoos ku xusan: Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia xidhiidha waafaqsanaanta Dastuurka. Golaha Guurtidu waxa uu yeelanayaa Xoghaye aan xubin ka ahayn Golaha.
Shuruudaha Xubnaha Qod. Haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii xubinnimada. Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Waajibaadka Muwaadinka iyo Ciqaabta Gudasho La’aanta. Habka loo Raaco Xeer-dejinta. Si dhallinyarada loogu xaqiijiyo koritaanka jidhka iyo maskaxda oo caafimaad qaba, korna loogu qaado barbaarintooda iyo dareenkooda Dawladdu waxay ahmiyad gaara siinaysaa horumarinta iyo dhiiri-gellinta ciyaaraha jidhka iyo isboortiga, kuwaas oo loo aqoonsan doono maadooyinka asaasiga ah somallland ka mid ah manhajka waxbarashada dugsiyada dawladda iyo kuwa kale.
Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u leeyihiin in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda. Guddida Culimada iyo Waajibaadka Guddida. Inay sameeyaan cilmi-baadhis nooc kasta ha ahaadee iyagoo ka eegaya dhinaca Diinta, gaar ahaan horumarka cilmiga sayniska iyo Diinta.
Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara.
Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka. Xukun dembi ah oo xilka lagaga xayuubiyey; j. Xubnaha Golaha Guurtida waxa lagu soo dooranayaa doorasho, habka doorashadana waxa nidaaminaya xeer. Golaha Wakiilada waxa kale oo kala diri kara Madaxweynaha, ka dib marka uu dadweynuhu sababaha uu ku dhisay kala diridooda ku oggolaado Afti-qaran oo ay qaban-qaabiso Maxkamadda Dastuuriga ahi.
Horumarinta Cilmiga iyo Suugaanta Hiddaha iyo Dhaqanka. Ribada iyo macaamilooyinka ganacsi ee dhib u leh bulshada iyo ku xoolaysiga sifo aan sharci ahayni way reebban yihiin. Dawladda ayaa muwaadiniinta u dammaanad qaadaysa xuquuqda iyo xorriyadaha.
Mashruuc-sharci waxa uu xeer ku noqonayaa ansixinta Golaha Wakiilada waxaanu dhaqan gelayaa ka dib marka uu Madaxweynuhu saxeexo sida ku cad Qod. There is now a total of Articles Qodobo as compared to the previous Jamhuurkyadda.
Golaha waxa ku waajib ah inuu hubiyo in tallaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan. Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha. Golaha Wasiiradu waxay Madaxweynaha ka kaalmaynayaan fulinta xilkiisa iyaga oo wadajir somalilad go’aamin doona siyaasadda guud, qorshayaasha iyo barnaamijyada Dawladda.
Golaha Wakiiladu waxa uu ka doodi karaa, waxna ka beddeli karaa miisaaniyadda, kuna ansixinayaa go’aan Gole. Waxa Qaranku yeelanayaa Waax Garsoor, oo hawsheedu ta hay u gar-naqa ka dhaxeeya Dawadda iyo dadka; iyo dadka dhexdooda. Magacyada Guddiga Jmahuuriyadda Dastuurka: Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha iyo hay’adaha; d.
Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood oo kala ah: Ma bannaana in qofna la qabto, la baadho ama la xayiro, haddii uusan markaa dembi faraha kula jirin, ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lihi.